အလှစစ်ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား (၂)ကား - For her Myanmar
အလှစစ်ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား (၂)ကား
ဒီဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးရင် ဝိတ်ချဖို့ တွေးမိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးနော်
ဒီတစ်ခေါက်ရုပ်ရှင်အညွှန်းကဏ္ဍမှာ အက်ဒ်မင်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသ ဒရာမာဇာတ်ကားလေးနှစ်ကားကို ညွှန်းပေးမယ်နော်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသကားဆိုပေမဲ့ ကြည့်ရှုသူတွေ ဘဝအမောပြေစေရုံတင်မကဘဲ လေးနက်တဲ့ အသိတရားလေးတွေကိုပါ ပေးနိုင်တာမို့ ညွှန်းပေးချင်တာပါနော်…
ပထမကားကတော့ Hair Spray လို့ အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက ထွက်ခဲ့တာတော့ ကြာပါပြီ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းကဆိုတော့ ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာပြီပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ အခုထိတောင် မရိုးနိုင်သေးတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်နေဆဲပါ။ သူက အဆိုအကတွေပါတဲ့ Musical ကားဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားတင်မက သူ့ထဲကသီချင်းတွေတောင် အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ယောင်းတို့လည်း ကြားဖူးမှာပါ။ သီချင်းနာမည်က I can hear the bell တဲ့… မူရင်းသီချင်းကို မသိဘူးဆိုရင်တောင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ “ဆည်းလည်းသံလေးများလို” ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုတော့ သိနေကြမှာပဲလေ.. ဒီသီချင်းနဲ့ ဆည်းလည်းသံလေးများလို သီချင်းက သံစဉ်တူတူပဲဖြစ်ပြီး စာသားကလည်း ၈၀%လောက် တူနေတာကိုး 😀 သြော် နောက်တစ်ခုက ပျိုမေတွေ အသည်းစွဲမင်းသားလေး Zac Efron (Highschool Musical မင်းသား) လည်း ပါဝင်တာမို့ ငယ်ဘဝ အလွမ်းပြေပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်…
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ထရေစီဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေး တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်လေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးပါ။ ကျောင်းသူလေး သူ့မှာ ကျောင်းစာထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားရတဲ့ အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက သူတို့ မြို့ရဲ့ တီဗီအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ The Corny Collins Show ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေရဲ့ အကအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဆင်းချိန်တိုင်း အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်း ပန်နီနဲ့အတူ မမောတမ်း လိုက်ကနေတတ်သူပါ။ နောက်တစ်ခုက သူ့ရဲ့ ခရပ်ရှပ်ဖြစ်တဲ့ လင့်ခ် ဆိုတဲ့ အတန်းထဲက လူချောလေးပေါ့။ လင့်ခ် နဲ့ သူ့ချစ်သူ အမ်ဘာ တို့ဟာ The Corny Collins Show ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ ထရေစီအတွက် The Corny Collins Show ထဲ ပါဝင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုတ်ထွက်တော့မှာမို့ လူသစ်လျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့ ကြေညာချက်ထွက်လာတာပါ။ အဲဒီနေရာအတွက် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ သူ့အမေက လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းက ထရေစီရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် အရွေးချယ်မခံရခဲ့ရင် ထရေစီလေး စိတ်ဆင်းရဲရမှာစိုးလို့ပါ။ ထရေစီ့အမေကိုယ်တိုင်လည်း လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက် ဝ လာတာမို့ အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်တာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့ ထရေစီကတော့ သူဝါသနာပါရာကို ဘာတွေပဲအတားအဆီးတွေရှိပါစေ လုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပြီးသားပါ.. ဒီနောက်မှာတော့….
ထရေစီအတွက် သူမရဲ့ ဝါသနာပါရာဖြစ်ခွင့်ရဖို့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကအတားအဆီးတကယ်ဖြစ်မှာလား ….
လူချောလေး လင့်ခ် နဲ့ရော ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြရမလဲ…
ဒါတွေကို သိချင်ရင်တော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ထွက်ရှိလာတဲ့ Hair Spray ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါရစေ။
Related Article >>> ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်စေမယ့် ထိုင်းရုပ်ရှင်ကားလေး (၂)ကား
နောက်ထပ်တစ်ကားကတော့ I Feel Pretty ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကလည်း ဟာသ ဇာတ်မြူးကားဆိုပေမဲ့ အပေါ်ကကားနဲ့ ကွာတာလေးက လူကြီးရုပ်ရှင်ကားမို့ ယောင်းတို့ ၁၈ယောက်စုပြီးမှ ကြည့်လို့ရတဲ့အခန်းတွေပါပါတယ်လို့ 😛
ကဲ ဇာတ်လမ်းစပြီနော် …
ရီနေး ဟာ နာမည်ကျော် အလှကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ မထင်မရှားရုံးခွဲလေးမှာ အလုပ်လုပ်နေရသူပါ။ ထွားကျိုင်းတုတ်ခိုင်တဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် ငါမလှဘူးဆိုတဲ့ အစွဲလေးနဲ့ သိမ်ငယ်နေရှာသူလေးပေါ့။ မိန်းကလေး သွယ်သွယ်လျလျလေးတွေ တွေ့ရင်လည်း အရမ်းအားကျတတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူ့ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ကို ကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားရင်း ရုံးချုပ်ရဲ့ဧည့်ကြိုကောင်တာမှာ လူခေါ်ဖို့ရှိကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ ဧည့်ကြိုရာထူးဆိုပေမဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးမို့ တက်လမ်းအများကြီးရှိတာကြောင့် လုပ်ချင်သူတွေက အများကြီးပေ့ါ။
ကုမ္ပဏီကလည်း သူ့တို့ကုမ္ပဏီပုံရိပ်တက်စေတဲ့နေရာမို့ ချောပေ့၊ လှပေ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကို ခန့်တာပါ။ ရီနေးဟာ အဲဒီရာထူးကို အသည်းအသန်လျှောက်ချင်သလို လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းကလည်း သူနဲ့ အကုန်ကိုက်ညီနေပါတယ်။ တစ်ချက်ကလွဲရင်ပေါ့။ ချောမောလှပသူဖြစ်ရမည် ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ သူနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ သူ့ဘာသာထင်နေပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့ ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလို မှော်ဆန်တဲ့ အရာတစ်ခုခုက သူမကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ရုပ်ရည်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ မှော်ဆန်တဲ့အရာက ဖြစ်မလာပါဘူး… တကယ်ဖြစ်လာတာက လှချင်ဇောနဲ့ Gym ဆော့ရင်း ရီနေးတစ်ယောက် ခေါင်းထိပြီး သတိမေ့သွားတာပါ။ သတိပြန်ရလာတော့ ရီနေး ဟာ ဆိုက်ကို တစ်ခုဝင်သွားပါတယ်။ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အမိုက်စားဖြစ်သွားပြီ သူအရမ်းလှသွားပြီဆိုပြီး ယုံကြည်သွားပါတယ်။ မှန်ကြည့်တိုင်းလည်း သူ့ကိုယ်သူ ကျေနပ်လို့ နေပါတော့တယ်။ သူထင်တာက သူမျှော်လင့်ထားတဲ့ မှော်ဆန်တဲ့ အရာ တကယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့။ တကယ်က ပြောင်းလဲတာက သူ့ အသွင်အပြင်အပေါ် သူထားတဲ့ အမြင်ပါပဲ။
Related Article >>> ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် တသောသောရယ်နေစေရမယ့် ဟာသရုပ်ရှင် (၃) ကား
သူ့အလှသူ ယုံကြည်မှုရှိသွားတဲ့ ရီနေး အဲဒီကစပြီး ဘာမဆို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ လုပ်သလို လုပ်တိုင်းလည်း ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
သူလုပ်သမျှဖြစ်နေတာ သူထင်နေသလို လှပတဲ့ သူ့ပုံစံကြောင့်လား?
ကဲ ယောင်းတို့လည်း ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီး တကယ့် အလှစစ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိနိုင်ကြပါစေကွယ်…
ဒီဇာတျကားတှကွေညျ့ပွီးရငျ ဝိတျခဖြို့ တှေးမိတော့မှာ မဟုတျဘူးနျော
ဒီတဈခေါကျရုပျရှငျအညှနျးကဏ်ဍမှာ အကျဒျမငျက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသ ဒရာမာဇာတျကားလေးနှဈကားကို ညှနျးပေးမယျနျော။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသကားဆိုပမေဲ့ ကွညျ့ရှုသူတှေ ဘဝအမောပွစေရေုံတငျမကဘဲ လေးနကျတဲ့ အသိတရားလေးတှကေိုပါ ပေးနိုငျတာမို့ ညှနျးပေးခငျြတာပါနျော…
ပထမကားကတော့ Hair Spray လို့ အမညျရတဲ့ ရုပျရှငျဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားက ထှကျခဲ့တာတော့ ကွာပါပွီ။ ၂၀၀၇ ခုနှဈကတညျးကဆိုတော့ ဆယျနှဈကြျောကွာပွီပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ အခုထိတောငျ မရိုးနိုငျသေးတဲ့ ကားကောငျးတဈကား ဖွဈနဆေဲပါ။ သူက အဆိုအကတှပေါတဲ့ Musical ကားဖွဈပွီး ဇာတျကားတငျမက သူ့ထဲကသီခငျြးတှတေောငျ အောငျမွငျခဲ့တာပါ။ အဲဒီထဲက သီခငျြးတဈပုဒျကတော့ ယောငျးတို့လညျး ကွားဖူးမှာပါ။ သီခငျြးနာမညျက I can hear the bell တဲ့… မူရငျးသီခငျြးကို မသိဘူးဆိုရငျတောငျ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးရဲ့ “ဆညျးလညျးသံလေးမြားလို” ဆိုတဲ့ သီခငျြးကိုတော့ သိနကွေမှာပဲလေ.. ဒီသီခငျြးနဲ့ ဆညျးလညျးသံလေးမြားလို သီခငျြးက သံစဉျတူတူပဲဖွဈပွီး စာသားကလညျး ၈၀%လောကျ တူနတောကိုး 😀 သွျော နောကျတဈခုက ပြိုမတှေေ အသညျးစှဲမငျးသားလေး Zac Efron (Highschool Musical မငျးသား) လညျး ပါဝငျတာမို့ ငယျဘဝ အလှမျးပွပေေါ့ ယောငျးတို့ရယျ…
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ထရစေီဆိုတဲ့ ကောငျမလေးက ပွညျ့ပွညျ့ဖောငျးဖောငျးလေး တုတျတုတျခိုငျခိုငျလေးနဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ဆယျကြျောသကျလေးပါ။ ကြောငျးသူလေး သူ့မှာ ကြောငျးစာထကျပိုပွီး စိတျဝငျစားရတဲ့ အရာနှဈခုရှိပါတယျ။ တဈခုက သူတို့ မွို့ရဲ့ တီဗီအစီအစဉျဖွဈတဲ့ The Corny Collins Show ဆိုတဲ့ ဆယျကြျောသကျလေးတှရေဲ့ အကအစီအစဉျဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးဆငျးခြိနျတိုငျး အဲ့ဒီအစီအစဉျကိုကွညျ့ပွီး သူငယျခငျြး ပနျနီနဲ့အတူ မမောတမျး လိုကျကနတေတျသူပါ။ နောကျတဈခုက သူ့ရဲ့ ခရပျရှပျဖွဈတဲ့ လငျ့ချ ဆိုတဲ့ အတနျးထဲက လူခြောလေးပေါ့။ လငျ့ချ နဲ့ သူ့ခဈြသူ အမျဘာ တို့ဟာ The Corny Collins Show ရဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
တဈနတေ့ော့ ထရစေီအတှကျ The Corny Collins Show ထဲ ပါဝငျနိုငျဖို့ အခှငျ့အလမျးတဈခုပျေါလာပါတယျ။ အဲဒါကတော့ အဖှဲ့ဝငျတဈဦးနှုတျထှကျတော့မှာမို့ လူသဈလြှောကျထားနိုငျမယျလို့ ကွညောခကျြထှကျလာတာပါ။ အဲဒီနရောအတှကျ ဝငျရောကျလြှောကျထားမယျလို့ဆုံးဖွတျလိုကျတဲ့အခါ သူ့အမကေ လုံးဝကနျ့ကှကျပါတယျ။ အကွောငျးအရငျးက ထရစေီရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွောငျ့ အရှေးခယျြမခံရခဲ့ရငျ ထရစေီလေး စိတျဆငျးရဲရမှာစိုးလို့ပါ။ ထရစေီ့အမကေိုယျတိုငျလညျး လကျထပျပွီးတဲ့နောကျ ဝ လာတာမို့ အိမျထဲကနအေိမျပွငျမထှကျတာ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာပါပွီ။ ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာတဲ့ ထရစေီကတော့ သူဝါသနာပါရာကို ဘာတှပေဲအတားအဆီးတှရှေိပါစေ လုပျမယျလို့ ရညျရှယျထားပွီးသားပါ.. ဒီနောကျမှာတော့….
ထရစေီအတှကျ သူမရဲ့ ဝါသနာပါရာဖွဈခှငျ့ရဖို့ သူ့ရဲ့ ကိုယျခန်ဓာကအတားအဆီးတကယျဖွဈမှာလား ….
လူခြောလေး လငျ့ချ နဲ့ရော ဘယျလို ရငျဆိုငျကွရမလဲ…
ဒါတှကေို သိခငျြရငျတော့ ၂၀၀၇ ခုနှဈက ထှကျရှိလာတဲ့ Hair Spray ရုပျရှငျကိုကွညျ့နိုငျပါတယျလို့ ညှနျးဆိုလိုကျပါရစေ။
Related Article >>> ဘဝအမောတှေ ပွပြေောကျစမေယျ့ ထိုငျးရုပျရှငျကားလေး (၂)ကား
နောကျထပျတဈကားကတော့ I Feel Pretty ဆိုတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကလညျး ဟာသ ဇာတျမွူးကားဆိုပမေဲ့ အပျေါကကားနဲ့ ကှာတာလေးက လူကွီးရုပျရှငျကားမို့ ယောငျးတို့ ၁၈ယောကျစုပွီးမှ ကွညျ့လို့ရတဲ့အခနျးတှပေါပါတယျလို့ 😛
ကဲ ဇာတျလမျးစပွီနျော …
ရီနေး ဟာ နာမညျကြျော အလှကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ မထငျမရှားရုံးခှဲလေးမှာ အလုပျလုပျနရေသူပါ။ ထှားကြိုငျးတုတျခိုငျတဲ့ သူ့ခန်ဓာကိုယျကွောငျ့ ငါမလှဘူးဆိုတဲ့ အစှဲလေးနဲ့ သိမျငယျနရှောသူလေးပေါ့။ မိနျးကလေး သှယျသှယျလလြလြေးတှေ တှရေ့ငျလညျး အရမျးအားကတြတျပါတယျ။ တဈနတေ့ော့ သူ့ကုမ်ပဏီရုံးခြုပျကို ကိစ်စတဈခုနဲ့သှားရငျး ရုံးခြုပျရဲ့ဧညျ့ကွိုကောငျတာမှာ လူချေါဖို့ရှိကွောငျးသိလိုကျရပါတယျ။ ဧညျ့ကွိုရာထူးဆိုပမေဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးမို့ တကျလမျးအမြားကွီးရှိတာကွောငျ့ လုပျခငျြသူတှကေ အမြားကွီးပေ့ါ။
ကုမ်ပဏီကလညျး သူ့တို့ကုမ်ပဏီပုံရိပျတကျစတေဲ့နရောမို့ ခြောပေ့၊ လှပဆေို့တဲ့အမြိုးသမီးငယျလေးတှကေို ခနျ့တာပါ။ ရီနေးဟာ အဲဒီရာထူးကို အသညျးအသနျလြှောကျခငျြသလို လိုအပျတဲ့အရညျအခငျြးကလညျး သူနဲ့ အကုနျကိုကျညီနပေါတယျ။ တဈခကျြကလှဲရငျပေါ့။ ခြောမောလှပသူဖွဈရမညျ ဆိုတဲ့အခကျြကိုတော့ သူနဲ့မကိုကျညီဘူးလို့ သူ့ဘာသာထငျနပေါတော့တယျ။ အဲဒီတော့ ရုပျရှငျကားတှထေဲကလို မှျောဆနျတဲ့ အရာတဈခုခုက သူမကိုယျခန်ဓာနဲ့ ရုပျရညျကိုပွောငျးလဲပေးနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပါတော့တယျ။
တကယျတော့ မှျောဆနျတဲ့အရာက ဖွဈမလာပါဘူး… တကယျဖွဈလာတာက လှခငျြဇောနဲ့ Gym ဆော့ရငျး ရီနေးတဈယောကျ ခေါငျးထိပွီး သတိမသှေ့ားတာပါ။ သတိပွနျရလာတော့ ရီနေး ဟာ ဆိုကျကို တဈခုဝငျသှားပါတယျ။ သူ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ အမိုကျစားဖွဈသှားပွီ သူအရမျးလှသှားပွီဆိုပွီး ယုံကွညျသှားပါတယျ။ မှနျကွညျ့တိုငျးလညျး သူ့ကိုယျသူ ကနြေပျလို့ နပေါတော့တယျ။ သူထငျတာက သူမြှျောလငျ့ထားတဲ့ မှျောဆနျတဲ့ အရာ တကယျဖွဈလာတယျပေါ့။ သူ့ခန်ဓာကိုယျပွောငျးလဲသှားတယျပေါ့။ တကယျက ပွောငျးလဲတာက သူ့ အသှငျအပွငျအပျေါ သူထားတဲ့ အမွငျပါပဲ။
Related Article >>> ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ တသောသောရယျနစေရေမယျ့ ဟာသရုပျရှငျ (၃) ကား
သူ့အလှသူ ယုံကွညျမှုရှိသှားတဲ့ ရီနေး အဲဒီကစပွီး ဘာမဆို ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ လုပျသလို လုပျတိုငျးလညျး ဖွဈတော့တာပါပဲ။
သူလုပျသမြှဖွဈနတော သူထငျနသေလို လှပတဲ့ သူ့ပုံစံကွောငျ့လား?
ကဲ ယောငျးတို့လညျး ဒီရုပျရှငျကားလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး တကယျ့ အလှစဈဆိုတာ ဘာလဲ သိနိုငျကွပါစကှေယျ…
Tags: Beauty, Entertainment, Fashion, fiction, lifestyle, love, Motivation
Gone With the Wind ရုပ်ရှင်ရဲ့ ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုများ
အသုံးဝင်လွန်းတဲ့ if pattern (conditional clause) ကို ဘယ်လို မှန်မှန်သုံးကြမလဲ?
Sugar Cane August 16, 2018